Top 5 Izindawo zokudlela ezihamba phambili zesitimela eYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Top 5 Izindawo zokudlela ezihamba phambili zesitimela eYurophu
Ukuhamba ngezitimela kuyindlela ejwayelekile kunazo zonke e-Europe. Ngakho-ke, ezinye zeziteshi zezitimela ezixakeke kakhulu emhlabeni ziseYurophu futhi ngezinye izikhathi, emhlabeni.
Naphezu kokuba bekuminyene ngamahora aphezulu, phezulu 5 iziteshi zezitimela ezihamba phambili eYurophu zenzelwe ukunikeza noma yini ongase uyidinge ohambweni lwakho.
Landela uhambo lwethu oluya e-Europe futhi uthole ukuthi yisiphi isiteshi sesitimela esiphambili kunazo zonke eYurophu. Ususondele ekutholeni ukuthi ungalalela kuphi iVivaldi futhi ngasiphi isiteshi sesitimela ongakulinda ngasemfuleni wena ngokuhamba kwakho kwesitimela uya e-Italy.
1. Isiteshi Sesitimela saseGare Du Nord, Paris
UGare du Nord eParis (Ukuchazwa kwegama le-Gare ngesiFulentshi iSiteshi Sesitimela, INord ngesiFulentshi isenyakatho) yisiteshi esikhulu kunazo zonke eYurophu. Kukhona abasondelene 700,000 abagibeli abadlula esiteshini sesitimela nsuku zonke. Isiteshi sesitimela siseduze kwe 10th ukuhlelwa kabusha eNyakatho yeParis, ngakho iningi labagibeli bangamaParis. kuphela 3% Abagibeli besitimela yizivakashi ezivela noma ezivela e-UK Eurostar isitimela.
Isiteshi sesitimela esixakeke kakhulu eYurophu sakhiwe ngaphakathi 3 iminyaka, phakathi 1861 futhi 1864. Umklami-eklanyelwe 9 izifanekiso ezibabazekayo ezihlobisa isiteshi sesitimela ngaphakathi futhi 23 izithombe ezihlotshisiwe ngethoni yesiteshi. Lezi zithombe zibonisa amadolobha amakhulu aseYurophu isitimela esixhumanisa neParis.
Isiteshi sesitimela esimangalisayo sandiswa kabili eminyakeni futhi kulindeleke ukuthi sandiswe futhi ngenxa yokwanda kwabagibeli nemizila kaloliwe.
IParis-Nord yisiteshi sesitimela sokuhambela eNyakatho yeFrance nezindawo zomhlaba jikelele, Ngokwesibonelo, Germany, London, futhi Amsterdam. Ngakho, lesi sitimela esimejimile sizokunikeza konke okusemqoka kokuhamba kwakho amaholide eFrance. Kukhona izitolo, isikhungo semininingwane yabavakashi, ikhofi izitolo, nezikhiye zemithwalo uma ufuna ukuhlola kahle i-Paris amahora ambalwa ngaphambi kokuthi isitimela sakho sihambe.
2. Isiteshi esikhulu seHamburg, Germany
Ngaphezu kwe 500,000 abagibeli badlula eHamburg Hbf (I-Hbf isinqamuleli esiya eHauptbahnhof esihumusha esiteshini esiPhakathi) esiteshini sesitimela eJalimane. Ngakho, kuyisiteshi sesitimela esikhulu kunazo zonke eYurophu.
Isiteshi sesitimela sakhiwe ngaphakathi 4 iminyaka abaklami uHeinrich Reinhardt noGeorg Subenguth bayiklama. Isiteshi sesitimela savulwa ngaphakathi 1906 futhi 1991 kwafakwa indawo yokuthenga kubhuloho elisenyakatho, lapho kunendawo yokudlela, izikhala, ekhemisi, kanye nezikhungo zosizo.
Uma uhlela travel isitimela eya eJalimane, ungajabulela umculo we-classic. Ngakho, ngenkathi uyothenga izikhumbuzo zomzuzu wokugcina, okubalulekile kokuhamba, nokubamba ukuluma ukudla, wamukelekile kakhulu ukulalela futhi ujabulele izinkathi ezine zeVivaldi.
Isiteshi esikhulu kunazo zonke eSwitzerland siseZurich. I-Zurich HB (I-HB ifana ne-Hbf futhi isho iHauptbahnhof = Isiteshi Esiphakathi) esiteshini sesitimela singesinye seziteshi zesitimela ezihamba phambili eYurophu. Lesi sitimela saseSwitzerland esimatasatasa sixhuma iSwitzerland namadolobha ezweni lonke nangamazwe angomakhelwane. Bangu 13 amapulatifomu kanye 2,915 izitimela ziya eJalimane, Italy, France, kanye ne-Austria nsuku zonke. Ngakho-ke, isiteshi sezitimela saseZurich singesinye sezitimela ezihamba phambili emhlabeni.
Okunye okwenza lesi siteshi sesitimela sibe matasa kunazo zonke eYurophu ukuthi empeleni kukhona ukuzamazama & impilo yasedolobheni ephithizela ngaphakathi esiteshini. Ngokwesibonelo, kuya ngesikhathi sakho sohambo, ungase ukujabulela izimakethe zikaKhisimusi and street parades.
Isiteshi sesitimela saseZurich sisedolobheni elidala laseZurich. I Umfula uSihl lidlula esiteshini, lokhu kusho ukuthi kukhona amathrekhi kaloliwe angenhla nangaphansi kwawo.
Futhi, Isiteshi sesitimela saseZurich sixhuma iSwitzerland neFrance, Germany, Italy, I-Czech Republic, nase-Austria.
Ngokufanayo nakwezinye iziteshi zezitimela zomhlaba wonke ezikuloluhlu lwethu, kukhona ihhovisi lokushintshana ngemali, ihhovisi lamathikithi, ukugcinwa kwemithwalo, isikhungo semininingwane yabavakashi, ne-inthanethi ye-Wi-Fi esiteshini sesitimela saseZurich. Ngakho, uma ukhohlwe ukupakisha okuthile okwakho iholide eSwitzerland, akukho okukhathazayo ngoba esiteshini ungathola konke.
4. Isiteshi Sesitimela saseRoma, Italy
Isiteshi sesitimela saseRoma sibonisa phezulu kwethu 5 iziteshi zezitimela ezixakeke kakhulu eYurophu ngenxa yenani labagibeli elisebenzayo lonyaka. Kuya ku 150 abagibeli abayizigidi bafika futhi basuke esiteshini esimatasa esitimela njalo ngonyaka.
Isiteshi sesitimela saseRoma sixhumanisa iRoma Termini namanye amadolobha ase-Italy Trenitalia. Ngaphezu kwalokho, isiteshi sesitimela sixhuma i-Italy emazweni angomakhelwane nge 29 amapulatifomu. Ngokwesibonelo, kusuka eRoma Termini, ungavakashela eGeneva eSwitzerland, Munich eGermany, naseVienna e-Austria.
Isiteshi sesitimela saseRoma sinakho konke umhambi angadinga ukuqeqesha khona ukuhamba eYurophu noma e-Italy. Ngakho-ke, ehholo lokungena, uzothola ihhovisi lokushintshana ngemali, zokudla, izinsiza zamatekisi, futhi izindawo zemithwalo. Konke kuhlelwe futhi kuklanyelwe ukwenza ukuhamba kwakho kuhambe kahle ngangokunokwenzeka.
5. Isiteshi sesitimela saseMunich Hauptbahnhof, Germany
Namuhla kukhona 32 amapulatifomu kwesinye seziteshi zezitimela ezihamba phambili eYurophu. Ngaphezu kwalokho, kunezinsiza zezitimela ze-InterCity ne-EuroCity iningi leJalimane, futhi Italy, France, Switzerland, nase-Austria. Ukusuka esiteshini sesitimela saseMunchen Hauptbahnhof ungahamba uye eBerlin, Frankfurt, IVienna eJalimane noma bathathe isitimela baye eVenice naseRoma e-Italy, Paris, futhi Zurich.
Duzane 127 abagibeli abayizigidi bavakashela isiteshi sesitimela saseMunich minyaka yonke. This outstanding number makes the station one of the busiest train stations in Europe.
Ngokufanayo nakwezinye iziteshi zesitimela ezishiwo ngenhla, isiteshi sesitimela saseMunich sinikeza izikhungo eziningi nezinsizakalo kubahambi. Ngokwesibonelo, ungathola izitolo zokudla, izipho zezipho ngisho nezingane & imnyuziyamu yentsha esiteshini sesitimela.
Ngaphandle kwesiteshi, uzothola i-U-Bahn metro engaphansi komhlaba, izinsiza zamatekisi, nemugqa wethilamu ozokusa noma kuphi eMunich.
Noma ngabe ufuna isitimela sesifunda noma samazwe omhlaba ukuhamba eYurophu yonke, oda ithikithi lakho lesitimela nge Londoloza Isitimela. Sizojabula ukukusiza ekutholeni izinketho ezinhle kakhulu zamathikithi atholakalayo ngamanani amahle kakhulu.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Top 5 Izindawo zokudlela ezihamba phambili zesitimela eYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/busiest-train-stations-europe/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
BusiestTrainStations TrainStation traintravelaustria nbangibhabhi traintravelgermany